Miventy ny hiran’i Katie Melua ny Sloveniana mpanao fihetsiketsehana hanazavana ny hetsika mpitondra bisiliketa miady amin’ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Manaja ny tsi-fifampikasohana sady manao maska ireo mpitondra bisikileta mitolona
Voadika ny 25 Mey 2020 10:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, русский, Español, English
Sloveniana mpanao fihetsiketsehana am-bisikileta ahitana lehilahy iray mitondra sora-baventy mivaky hoe “Matesa ny fasisma” sy ny “Fahafahana ho an'ny vahoaka.” Saripika: Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i Bajk Štrajk/YouTube.
Hamarino ny pejy fitantarana manokan'ny Global Voices miresaka fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Nalaza haingana manerana an'i Balkan ny hiram-panoherana an'ny Sloveniana manana gadona malefaka tsy mitovy toetra amin'ny karazany toy izany.
Fariparitan'ny mpanoratra ilay hira ho toy izao ny hira:
Hiram-panoherana kolikoly, fanoherana fihoaram-pahefana, fanoherana herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny lehilahy, fanoherana ny herisetra tsy tia demaokrasia sy fimaroana.
Mpitondra am-bisikileta an'arivony no nivoivoy nandritra ny herinandro tao amin'ny araben'ny renivohitra sloveniana, Ljubljana, sy ireo tanandehibe hafa ho fanoherana ny fitondrana vaovao, nandray ny asa tamin'ny 13 marsa.
Ny hira “10,000 bicycles in Ljubljana” [bisikileta 10000 ao Ljubliana] nosoratan'i Prešerne Misli, izay manana tononkira amin'ny fiteny Sloveniana sy Anglisy, dia navoaka tao amin'ny fantsona YouTube Bajk Štrajk (Bike Strike).
Ny governemantan'ny Repoblikan'i Slovenia dia tarihan'ilay praiminisitra mampiady hevitra antsoina hoe Janez Janša, izay niverina indray tao amin'ny tontolo politika rehefa nandany enimbolana am-pigadrana noho ny fanaovana kolikoly tamin'ny taona 2014.
Ny Antoko Demaokratika Sloveniana tarihiny dia ao anatin'ilay vondron'antoko tsy ofisialy firaisankinan'ny antoko tsy liberaly sy mpandrendri-bahoaka sy pro-tsirefesimandidy — ny Antokom-Bahoaka Eoropeana tarihan'ny antoko hongroà Fidesz mitondra amin'izao fotoana izao.
Nambaran'ny Praiminisitry ny governemanta Janša tamin'ny 30 avrily ny “lalàna anti-Corona” ho fiarovana ny fahasalaman'ny olom-pireneny sy “hamelomana indray ny toekarena — indrindra fa ny sehatry ny fanorenana.”
Na izany aza, miporitsadritsaka ny governemanta eo amin'ny fepetra hany ka simba tanteraka ny tontolo ara-piarovana, mahatonga ny fikambanana ara-tontolo iainana hanao fihetsiketsehana.
Araka ny BirdLife International:
Tena mihoa-pefy tokoa ity lalàna vaovao ity, nalefa hodinihan'ny Fitsarana ara-Dalampanorenan'i Slovenia izy ity. Mety hanitsakitsaka mivantana ny Lalampanorenana Slovenina sy ny dinan'i Aarhus ny ampahany amin'izy io.
Lasibatry ny hiram-pitolomana ihany koa ny politikam-pampisaraham-bazana mandrendri-bahoaka ampiharin'ny antoko mitondra, ao anatin'izany ny fampiroboroboana ny kabarim-pankahalana ataon'ny fampitam-baovao mpikambana.
Ry governemanta hajaina ô atsaharo ny fampisaraka anay ho roa,
ankavanana sy ankavia.
Tsy maninona intsony izany.
Ny hany manandanja aminay dia ny hanehoanareo fanajana.
Tamin'ny 27 marsa, nampitandrina ny Reporters Sans Frontières (RSF) sy ny fikambanana enina hafa misahana ny fahalalahan-gazety fa lasibatry ny fanentanam-pankahalana velomin'ny governemanta ao amin'ny tambajotra sosialy sy ny fampitam-baovao ny Sloveniana mpanora-gazety fanadihadiana Blaž Zgaga.
Nanomboka izany fanentanana izany rehefa nandefa taratasy fangatahana fahalalahana ara-torohay amin'ny fomba ofisialy momba ny areti-mandringana COVID-19 tamin'ny manampahefana tao Ljubljana i Zgaga.
Nandrisika ny Vaomiera Eoropeana ny fikambanana firaisamonim-pirenena sy iraisampirenena hanao izay rehetra eo ampelatanany mba hiantohana ny ain'i Zgaga ary horaisina ho tena matotra indrindra ny fandrahonana ho faty sy ireo toratoraka ataon'ny manampahefana sloveniana aminy.
Hitolona am-pilaminana izahay,
amin'ny maska sy ny tavanay.
Ary hanaja elanelana.
Tsy ho avelanay hidaraboka ny rafi-pahasalamanay.
Tokotani-tsehatra ara-kolontsaina sy fiandohana
Ny hiram-pitoloman'ny mpitondra bisikileta sloveniana dia cover ny hira“Nine Million Bicycles” nosoratana sy novokarin'i Mike Batt ho an'ilay mpihira sady mpamoronkira Georgiana-Britanika Katie Melua tamin'ny taona 2005.
Manankambo tanteraka amin'ny lovan-kolontsainy ny Sloveniana, indrindra moa fa ny fiteniny araka ny asehony amin'ny alalan'ny poezia sy ny literatiora hafa.
Ny anaran'ny tarika Prešerne misli dia azo adika eo noho eo hoe “Eritreritra matevin'ny faniriana tsara” sady azo ampiarahana ihany koa amin'ny anaran'i France Prešern, poeta nanana ny lazany tamin'ny taonjato faha-19, izay heverina ho klasika eoropeana ny asa-sorany, ary notakiana ho tsy maintsy vakiana tamin'ny fandaharam-pianarana tamin'i Yogoslavia teo aloha.